सलमानको भारतमा वरुण पनि ! « Ramailo छ
सलमानको भारतमा वरुण पनि !
सलमान खानको भारतमा स्टार कास्टलाई लिएर निकै उतार चढाब आईरहेको छ । प्रियंका चोपडाले सलमानको भारत छोडेपछि कैटरिना कैफको इन्ट्री भएको थियो । अब यो फिल्ममा फेरी एउटा नाम जोडिने कुरा आएको छ ।
सलमानको भारतमा वरुण धवण पनि हुने कुरा आएको छ यद्पी आधिकारिक रुपमा पुष्टि भएको छैन । ‘टाइगर जिन्दा है’ मा सलमान र कटरीनासँग काम गरेका अली अब्बास जफरले भारतको निर्देशन गर्दैछन् । माल्टामा फिल्मको केहि सिन शुट गरेर दोस्रो सेडयुल अनुसार अहिले यो टिम धाबीमा पुगेका छन् ।
भारतमा सलमान खान पाँच फरक फरक अवतारमा देखिदै छन । फिल्ममा सलमान र कैटरिनासँगै दिशा पाटनी, सुनिल गोवर, तब्बूको पनि मुख्य भमिका रहेको छ भने वरुण धवण पनि रहन सक्छन् । फिल्मको रिलिज डेट २०१९ को ईदलाई तोकिएको छ ।